सबैभन्दा दुःखको कुरा सम्झिनुपर्दा चाँही म २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पलाई सम्झिन्छु । जुन दिन भएको एउटा सानो हाम्रो घर पनि आँखा अगाडी नै सबै भत्कियो । आफ्नो बस्ने ठाउँ नभएर अरुको घरमा सहारा लिएर बस्नुप¥यो । अरुको घर जति नै राम्रो ठूलो भएपनि आफ्नो जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र ? एक महिना त्यतिकै अरुकोमा बस्यौं, त्यो दिन साह्रै नरमाइलो लाग्छ । सुखका दिन सम्झनुपर्दा चाँही पछि फेरी आफैंले सानो घर बनायौं । सबै जना त्यही घरमा बस्यौं । सानै भएपनि आफ्नै घरमा बस्न पायौं । यही दिन सबैभन्दा खुशीको दिन हो जस्तो लाग्छ जीवनमा अहिलेसम्म ।
१०. तपाई विभिन्न गीत–संगीत, नाटकमा समेत रुची राख्नु हुन्छ । यो क्षेत्रमा रुची चाँही कसरी जागृत भयो ।